Vita ny fanondranana poizina ny tanimboaloboka Nofaranana - Blog Ellicott Dredges
Vita ny fanondranana poizina ny tanimboaloboka N vita ny asa
Febroary 20, 2014
Taorian'ny fanemorana volana maromaro, dia saika feno ny tetikasa roa fananganana rano ao Tisbury.
Ny talen'ny komity Dredge Nevin Sayre dia nilaza ny alarobia izay miasa eo amin'ny fidirana amin'ny farihy mankany Lake Tashmoo ary eo amin'ny fidirana andrefana mankany amin'ny seranan'i Vineyard Haven izay nofonosina tamin'ny fiandohan'ity volana ity.
"Tena faly izahay ny vokatra," hoy Andriamatoa Sayre. Nilaza izy fa napetraka eo amoron-dranomasina ao Tashmoo sy ny tora-pasika eo amin'ny Grove avenue ary Owen Little Way.
"Indray mandeha indray izahay manana tora-pasika," hoy Andriamatoa Sayre. “Ny faritra manontolo amin'ny lalana Grove dia mahafinaritra rehefa mandeha izao. Efa nahita olona nandehandeha sy nivezivezy tany an-tanety aho, izay tsy nataonao teo aloha. ”
Nekena tamin'ny fivorian'ny tanàna tamin'ny volana aprily lasa teo ny tetikasa dredge tamin'ny alalàn'ny volana Aprily lasa teo, tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra mpampindram-bola $ 500,000. Ny farihin-dranomasina Tashmoo dia matetika misy rano. Tao amin'ny 1997 farany no nandehanana ny fidirana niankandrefana nankao amin'ny seranan-tsambo.
Notanterahina nanomboka ny faran'ny volana Mey ny asa saingy nahemotra rehefa vaky ny fitaovana namboarin'ny mpiantoka kontrakstable Dredge. Taorian'ny vanim-potoana fahavaratra, hoy Andriamatoa Sayre, dia natsipy indray ny asa “avy eo araka izay azo atao ka izany no misy tombony betsaka amin'ny fahavaratra ho avy.”
Nanomboka ny volana Desambra ny asa tany Tashmoo. Ny fandehanan-tsambo ny seranan-tsambo dia nanaraka ny vodony ary naharitra telo herinandro teo.
Nilaza Andriamatoa Sayre fa mbola tsy nahazo volavolan-dalàna avy amin'i Barnstable Dredge izy ary tsy nahalala hoe firy ny fasika noesorina. Nilaza izy fa nantenainy fa ny teti-bola dia hitaky ny teti-bolan'asa, ary ny tahiry ny tanàna dia namonjy ny vidin'ny fanamboarana tamin'ny alàlan'ny fanaovana ny Tashmoo sy ny seranan-tsambo.
"Tsy misy fambara hoe hisy ny tsy ampoizina," hoy Andriamatoa Sayre